Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo kalafadhigoodii 1-aad ku yeelan doona Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBaarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo kalafadhigoodii 1-aad ku yeelan doona Muqdisho
Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo kalafadhigoodii 1-aad ku yeelan doona Muqdisho. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kalafadhigii kowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la fiayaa in uu maanta oo Arbaco ah ka furmo gudaha Muqdisho, sida qorshuhu yahay.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmiya u furi doona kalafadhiga baarlamaanka.
Inta lagu guda jiro kala-fadhiga, xildhibaanada ayaa la filayaa in ay codka kalsoonida u qaadi doonaan Raysulwasaaraha cusub XasanCali Khayre, kaasoo dhawaan uu madaxweynuhu soo magacaabay.
January 23, 2018 Raysulwasaaraha Soomaaliya oo gaaray Switzerland si uu uga qeybgalo shirka Madasha Dhaqaalaha Adduunka